Kheyre oo Norway booqasho rasmi ah ku imaan doono, lana kulmi doono Erna Solberg - NorSom News
Kheyre oo Norway booqasho rasmi ah ku imaan doono, lana kulmi doono Erna Solberg
Foto: Somali PM Twitter
Reysulwasaaraha dowlada federalka ah ee Soomaaliya, Hassan Ali Kheyre ayaa dhamaadka isbuuca soo socdo booqasho rasmi ah ku imaan doono dalkan Norway, isaga oo ka qeybgali doono kulan looga hadlayo nabad-galyada aduunka oo ay soo qaban-qaabisay madasha Oslo Forum.
Sida ay NorSom News kasoo xiganeyso ilo ka agdhow xafiiska Reysulwasaaraha, Kheyre ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doono dowlada Norway, gaar ahaan wasiirka arimaha dibada, Børge Brende reysulwasaaraha Norway, Erna Solberg iyo wasiiro kale oo katirsan xukuumada Solberg.
Kheyre waxaa wafdigiisa kamid ah wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Jamaal Maxamed Xasan.
Imaanshaha Kheyre ee Norway ayaa noqon doono kii ugu horeeyay ee uu kusoo gaaro wadamada Galbeedka, ahna kii labaad ee uu u baxo inta uu hayay xilka reysulwasaaraha.
Jaaliyada soomaaliyeed ee Norway iyo guud ahaan wadamada Scandanevianka ayaa si weyn isugu diyaarinayo soo dhaweynta wafdiga reysulwasaare Kheyre, iyada oo Oslo laga dareemayo u diyaar-garowga soo dhaweynta wafdiga dowlada Soomaaliya.
Previous articleHassan Kheyre: Waxaan ahay soomaaligii ugu horeeyay ee Trikk ku wado Norway
Next articleTrondheim: Xaalada gabadhii ku dhacday hoolka dabaasha oo aad uga soo roonaatay